Tongasoa eto Trinidad, Izay Ahafahanao Manao Krismasy Fotsy (Fara Faharatsiny Ao Amin’ny Seranam-piaramanidina) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2016 11:59 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny teny Anglisy ny 2 Desambra lasa teo)
Ny ravaky ny Krismasy amin'ny lohahevitra ririnina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena ao Trinidad. Sary avy amin'i Gregory McGuire, nahazoana alalana.
Misy resabe izay mitranga amin'ny Facebook momba ny lohahevitra nandravahana ny Krismasy naseho tao amin'ny trano boriborin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Piarco ao Trinidad.
Raha tokony ho fandrraisina amim-kafanàna ny mpitsidika miaraka aminà sehatra tropikaly, tena mangatsiaka ny ravaka, noho ny sehatra misy tanànan'ny Krismasy feno ranomandry miaraka amin'ireo bera fotsy sy pingouins. Maro ireo mpampiasa aterineto no diso fanantenàna tamin'ny fomba nieritreretana izany, nilaza fa tsy nisy ifandraisany amin'ny zavatra tokony hasehon'i Trinidad sy Tobago ho an'ny vahoaka mpandeha ilay lohahevitra.
Tehamaina ho an'ny kolontsaina ao an-toerana?
Tao amin'ny lahatsoratra ho an'ny besinimaro, nizara sarin'ny sehatra ny mpampiasa Facebook, Gregory McGuire, ary niaiky fa nandritra ny fotoana fohy, tsy tena azony antoka ny toerana nisy azy:
Eny, fantatro fa misy amintsika no mankalaza Halloween sy miakatra eo an-tampon'ny tsirairay hafa ao anatin'ny hazakazaka adala manokan'ny tsenan'ny ‘Zoma Mainty’. Eny fantatro fa manenika ny fifamoivoizana an'habakabatsika […] ny kolontsaina pop Amerikana. Fa izany rehetra izany dia fanapahankevitra manokana noraisin'ny olona na [ny] sehatra tsy miankina […] mitetika ny hitrandraka ilay diso fantatra loatra fa fitiavan'ny mpanjifa ny zavatra avy any ivelany. Samy hafa izany.
Ahoana izany? Tsapan'i McGuire ho faniratsiràna ny zava-mahagagan'ny Krismasy ao an-toerana ilay sehatra vahiny:
Nisy 35 taona mahery izay no nitrangan'ny soca parang niteraka fahatsapantena vaovao amin'ny Krismasy tena mahafinaritra tao Trinbago […] Ankehitriny mba hiatrehana io zava-mahatsiravina io. TSY toerana ho an'ny tsy miankina io […] Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena antsika io. Toerana izay nananganantsika vao haingana fampirantiana ho an'ny fankalazana ny Divali. Io no sehatra, izay afaka telo herinandro, hanolorantsika ny Fetibe-ntsika, ny mas, ny mozika sy pan. Raha ny hevitro, mifanaraka amin'ny zavatra hitako [sic] ireo fampirantiana ireo, mba ho antony hilàna ny Hall ho toy ny toerana [sic] fampirantiana. Nampisongadina ny lova ara-kolotsaintsika manankarena ireo fampirantiana ireo, na ho an'ny mpitsidika na ho an'ny tompontany.
Ny endriky ny Krismasy eo an-toerana matetika dia mampiditra ravaka mavitrika, indraindray vita amin'ny akora eo an-toerana toy ny ravina aviavy, zavamaniry matanjaka amin'ny tany mafana na voan'ny calebasse. Amin'ny toerana an-kalamanjàna toy ny foibe fivarotana, ny mozikan'ny fialantsasatra dia fifangaroanà marika samihafa amin'ireo kilasikan'ny Krismasy, ny parang (hiram-bahoaka misy dindo Espaniola) sy ny fifangaroany, ny soca parang, izay mampiditra ny fanahin'ny calypso ao amin'ny gadona. Ary ho fanomezam-boninahitra ny ‘antony ho an'ny vanim-potoana’, matetika misy tranon'omby aseho ao amin'ny fampirantiana. Matetika hita taratra eo amin'ny fankalazàna ara-kolontsaina any Trinidad sy Tobago io fifangaroan'ny dindo io, noho ny fahasamihafana ara-poko sy ara-pivavahana misy ao amin'ny firenena.
Tezitra mikasika ny hoe mety nisy kely na tsy nisy fandaniana natao teo an-toerana tamin'ilay fampiratiana, mbola nanohy nametraka fanontaniana mitombina ny lahatsorany, anisan'izany ny “raha nisy fiheverana safidy natolotra tamin'ny fanomezana endrika miaraka amin'ny lohahevitra ao an-toerana” ary ohatrinona ny vola lany teo amin'ilay famolavolana endrika sy ny fametrahana azy:
Moa ve ireo Manampahefan'ny Seranam-piaramanidina afaka manome valinteny ho an'ny mponina ao Trinidad sy Tobago azafady? Angamba mety ho tsotra ny manàla io zavatra manorisory ny maso io ary manolo izany amin'ny zavatra izay maneho ny Krismasintsika.
Antsipirihany amin'ny fandravahana ny Krismasy 2015 tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Piarco, Trinidad. Sary avy aminin'i Gregory McGuire, nahazoana alalana.
Ireo fihetsehampo ireo dia naparitaky ny mpampiasa Facebook Che Rodriguez izay nilaza tao amin'ny lahatsoratra ho an'ny besinimaro:
Mamanàla ilay sariolona vita amin'ny ranomandry , Bera avy amin'ny tendron-tany, Ranomandry sy Tafo feno Ranomandry, Mistletoe, houx maitso ary Diera!!! Izao no aloa vola sy asehon'ny Manampahefan'ny Seranam-piaramanidina ao Trinidad-Tobago (AATT) ho toy ny FAMPISEHOANA KRISMASY ETO AN-TOERANA ao anatin'ny efitra fandraisam-bahoaka an'ny SERANAM-PIARAMANIDINA IRAISAM-PIRENENA PIARCO !!!! […]
Zavatra iray, raha misy ORINASA TSY MIANKINA iray te mba handoa vola amin'io karazana fampirantiana io…saingy ny DOLARAN'NY MPANDOA HETRA ao Trinidad sy Tobago no mamatsy vola zavatra izay manohitra ny kolontsaiko ary vahiny tanteraka amin'ny fironako amin'ny Krismasy!!!
Aiza ny fanehoana ny Parang Band-ko? Aiza ny Poinsettias-ko ao anaty voninahiny Mena sy Maitso???? Aiza ny latabatra feno Oseille sy Labiera misy Sakamalaho ary Pastelles sy Mofomamy Mainty???
Lohahevitra mafana momba ny adihevitra tao amin'ny pejy Facebook 96.1 WEFM ihany koa ilay fandravahana. Naneho hevitra i Gregory Medina, mpamorona endrika ao an-toerana hoe:
Piarco? Mahamenatra. Iza no nanome fankatoavana an'izao?
Niombon-kevitra i Noella Fuller, nilaza hoe:
Manohy ny fanariana ny kolontsaintsika tsy manam-paharoa isika!!
Nampian'i Yolande Dick hoe:
Mahafinaritra ity izy, saingy tsy milaza ny Krismasin'i T Sy T, raha tonga aty Trinidad Aho dia te-hahita ny fampisehoana ny Krismasin'i trinbago, indrindra raha vao avy nandao ranomandry aho. Vao nolazaiko teo.
Namerina ny heviny i Levi Horsford:
Koa satria Aho manaiky ny fomba fijery hoe seranam-piaramanidina iraisam-pirenena io, dia tena tsy hitako na izany aza ny ilàna ny handravahana ny seranam-piaramanidintsika mifototra amin'izay mety ho fijerin'ny tandrefana ny Krismasy. Nisidina avy any amin'ny tranony samihafa manerana izao tontolo izao ny olona, tsy ny mba hahita ny zavatra mitovy amin'ny nilaozan'izy ireo fa mba hahita kolontsaina sy hevitra vaovao. Tokony hirehareha isika handravaka ny seranam-piaramanidintsika miaraka amin'ny fiherevan'ny eto an-toerana ny atao hoe Krismasy. Angamba fanehoana toejavatra eny an-dalambe misy trano voaravaka, ankizy milalao eo ivelany, olona antitra miresaka eo amin'ny lavarangana fidirana, ary andiana parang mifindrafindra isan-tokonana. Fa tsy Krismasy fotsy miaraka amin'ny ranomandry vao nilatsaka sy ny bera fotsy. Deraina ny mpandravaka amin'ny asa vita tsara fa henatra ho anareo izay mametraka ny kolontsain'ny hafa hanitsaka ny anareo.
Nisy hevitra iray mifanohitra amin'izany avy amin'i Nyikluss Seales SC, izay namoaka sarin'ny takelaka fampisehoana iray tao amin'ny seranam-piaramanidina Heathrow ao Londona momba ny Fetibe masquerader tao Trinidad ary nanazava:
Mila mahatakatra ny Trinidadians fa tsy ilaina ho avy ao an-toerana daholo ny zava-drehetra. Tiako ilay hevitra sy ny fomba nanaovana azy. Eny Trini koa aho ato am-poko. Na izany aza tsy ny rehetra no manana ny fanehoan'ny trini ary mahafinaritra ny mody an-trano any Karaiba ary mahatsapa ho manokana amin'ny fahafantarana fa manohana sy mijery ny fomba maro samy hafa amin'ny fankalazana ny Krismasy izy ireo. Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena io ary mahafinaritra ny mahita fa hita eo daholo ny kolontsaina samy hafa, na dia any amin'ny nosy mamy Trinidad aza. Tany amin'ny seranam-piaramanidina aho vao haingana ny Alahady teo, ary nahita fandravahana samihafa tao amin'ny seranam-piaramanidina nampiseho [ ] ny […] kolontsainan'ny famoronana sy ny fanehoana ao an-toerana. Noho izany, alohan'ny hanaovanareo lahateny sy hanehoanareo fitondrantena ratsy, azafady, tadidio fa […] mahafinaritra ny mba manome fiheverana ho an'ny hafa. Tsy mianjera ao Trinidad ny ranomandry nefa azo aseho ho an'ny hafa izany toy ny hoe nahoana ny hazo voanio miaraka amin'ny vehivavy iray mipetraka eto ambaniny miaraka amin'ny Carib [labiera] rakotra hatsiaka mamirifiry no azo aseho ao amin'ny seranam-piaramanidina italianina.
Azo fintinina amin'ny hoe fitiavana manokana izany ary raha eo an-toerana na maneran-tany ny fomba fijerinareo; mety ho voatery hanaiky ny tsy fitovian-kevitra amin'izy ity ireo mpampiasa aterineto.
Fanavaozana: Nisy fiantraikany ny tarainan'ny media sôsialy ka nahatonga an'i Zola Joseph, Tale mpandrindra ny fifandraisana ao amin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidin'i Trinidad sy Tobago, nanambàra nanomboka teo hoe “mety hanao fanitsiana madinidinika amin'ny lafy sasany amin'ilay fampirantiana ilay mpandravaka […] nahazo fifanarahana asa. Mety hoesorina ireo endrika maneho ny ranomandry ary hosoloina—tsy hisy fandaniana amboniny—ravaka hafa izay hanasongadina ny tena endriky ny Krismasin'i T&T .” Ny sasany tamin'ireo mpampiasa aterineto anefa tsy tony tamin'ireo ‘fanatsaràna’ natao, tamin'ny filazàny fa “tsy maneho fisainana, endrika artistika, na maha-izy ny tena ara-kolontsaina” ilay haingo trôpikaly naseho.
17 ora izaySt. Vincent & the Grenadines